Gịnị kpatara Jamaica? Azịza nye ndụmọdụ US "Emela njem"
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Gịnị kpatara Jamaica? Azịza nye ndụmọdụ US “Emela njem”
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ gbasara Jamaica • News • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Gịnị kpatara Jamaica? Azịza nye ndụmọdụ US “Emela njem”
Akụ na ụba Jamaica na -adabere nke ukwuu na njem na njem njem. Ịdọ aka na ntị njem nke Ọkwa 4 nke United States bụ nnukwu mmechuihu na ihe iyi egwu nye mba agwaetiti ahụ. Ọtụtụ n'ime ha na -arụ ọrụ ma dabere na ọdịmma nke ụlọ ọrụ njem na njem, na ndị America bụ imirikiti ndị ọbịa ha.
Ngalaba Steeti United States na mmekorita ya na CDC nyere ndụmọdụ maka njem 4 maka Jamaica.
Ndụmọdụ ọkwa 4 bụ ndụmọdụ kachasị elu na agbụ ma pụtara maka ndị America "Emela njem."
Minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Jamaica zara ịdọ aka na ntị a na nkwupụta ewepụtara eTurboNews taa.
Onye minista na -ahụ maka njem nleta na Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, wepụtara nkwupụta a gbasara United States na -enye ndụmọdụ "Emela njem" megide Jamaica:
N'oge na-adịbeghị anya, Jamaica nabatara onye ọbịa ya ruru otu nde kemgbe ọ mepere njem na June 2020, ndị ọbịa nwere ike nwee ntụkwasị obi n'ịmara na Jamaica's Resilient Corridors-nke na-ekpuchi ihe karịrị pasent 85 nke ngwaahịa njem agwaetiti ahụ gụnyere ihe na-erughị otu pasent nke ndị bi na anyị-nwere dekọtara ọnụego ọrịa COVID-19 n'okpuru otu pasent n'ime afọ gara aga.
Emere nke a site na usoro siri ike etinyere yana ndị ọchịchị n'ofe ahụike na njem nlegharị anya. Usoro iwu ndị a so na ndị mbụ nwetara nkwado njem njem nchekwa ụwa na njem nlegharị anya nke nyere anyị ohere ịmalitegharị ọzọ na June 2020.
Ahụike na nchekwa nke onye Jamaica ọ bụla na onye ọ bụla bịara na mba ahụ ka bụ ihe kacha mkpa anyị, anyị na -atụkwa anya ọkwa ọkwa 4 nke Ụlọ Ọrụ Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa United States (CDC) ga -adị mkpụmkpụ.
Ọ bụ ezie na Jamaica bụ otu n'ime mba 77 gburugburu ụwa, gụnyere ọtụtụ ụmụnna anyị ndị Caribbean, ịnata ọkwa ọkwa 4, anyị ka nwere obi ike na Resilient Corridors na protocols anyị ga -aga n'ihu na -eduga anyị n'ụzọ ziri ezi.
United States enyela ịdọ aka na ntị njem 4 n'ọtụtụ mba Caribbean na-adabere na njem.
Mgbe ị na -enye Ndụmọdụ Njem Njem, gọọmentị US taa hapụrụ akụkụ nke ọ ga -adị mma ileta Jamaica ma e jiri ya tụnyere Florida ma ọ bụ Hawaii - ma a bịa n'ihe egwu nke ọrịa COVID.
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, abughi nani onye ndu obodo ya mana site na okike ya Ntughari njem nlegharị anya nke ụwa na ebe nsogbu, Jamaica anọwo na -ebute ụzọ zuru ụwa ọnụ ma a bịa n'ihe banyere njem nlegharị anya na nsogbu.
The Ụlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) enyela a Ọkwa 4 Ahụike Njem Rịba ama n'ihi COVID-19, na-egosi ọkwa dị oke elu nke COVID-19 na mba ahụ. Ihe ize ndụ gị nke ibute COVID-19 yana ibute ọrịa siri ike nwere ike belata ma ọ bụrụ na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa FDA kwadoro ọgwụ mgbochi. Tupu ime atụmatụ njem mba ofesi ọ bụla, biko lelee ntuziaka CDC maka ọgwụ ogwu na ejighị ọgwụ mgbochi ọrịa ndị njem. Gaa na ụlọ ọrụ nnọchite anya obodo COVID-19 peeji nke maka ozi ndị ọzọ na COVID-19 na Jamaica.
Agala njem na:
Mpaghara edepụtara n'okpuru nke Kingston n'ihi mpụ.
Mpaghara ndị edepụtara n'okpuru nke Montego Bay n'ihi mpụ.
Obodo Spanish n'ihi mpụ.
Nchịkọta obodo: Mpụ ime ihe ike, dị ka mwakpo ụlọ, izu ohi, mwakpo mmekọahụ, na igbu mmadụ bụ ihe a na -ahụkarị. Mwakpo mmekọahụ na-eme ọtụtụ oge, gụnyere ebe ntụrụndụ niile. Ndị uwe ojii mpaghara anaghị enwe ego iji zaghachi nke ọma maka ajọ mpụ. Ọrụ mberede na -adịgasị iche n'agwaetiti ahụ, oge nzaghachi nwere ike ịdị iche site n'ụkpụrụ US. Amachibidoro ndị ọrụ gọọmentị US ịga njem na mpaghara edepụtara n'okpuru, site na iji ụgbọ ala ọha, na ịnya ụgbọ ala na mpụga mpaghara Kingston edepụtara n'abalị.
US nyere ịdọ aka na ntị yiri nke ahụ megide ndị agbata obi Caribbean, gụnyere Bahamas.